🥇 accounting yehhovisi lamazinyo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 696
Ividiyo yokubalwa kwezimali kwehhovisi lamazinyo
Oda i-accounting yehhovisi lamazinyo
Ukubalwa kwehhovisi lamazinyo kubaluleke kakhulu! Ukuzenzakalela kwehhovisi lamazinyo kuvula lonke uhlu lwamathuba amasha kuwo wonke uchwepheshe! Isoftware ye-accounting office office isekela ukubalwa kwezimali, ukuphathwa kanye nokulawulwa kwempahla. Abasebenzisi abaningana bangasebenza ohlelweni lokubalwa kwamahhovisi wamazinyo ngasikhathi sinye. Ngasikhathi sinye, esigabeni sokusetshenziswa kwezimali kwehhovisi lamazinyo 'Audit', ungahlala uthola ukuthi yimuphi kubasebenzisi ofake lokhu noma lelo rekhodi noma walisusa. Ngosizo lohlelo lokuphendula lomsebenzi wehhovisi lamazinyo, abemukeli bangashesha ukwamukela ukukhokha. Ukukhokha kungenziwa ngokuya ngohlu lwamanani oluthile; kungaba uhlu lwamanani jikelele noma uhlu lwamanani olunezaphulelo noma amabhonasi. Uhlelo lokuqapha nehhovisi lamazinyo luhlinzeka ngokusebenza okuhlukile kwabaphathi, odokotela bamazinyo nochwepheshe, ngoba ngamunye wabo usebenza nendawo yakhe yokusebenza. Ngaphezu kwalokho, uhlelo lwezimali lokusebenza kwehhovisi lamazinyo lungenziwa ngezifiso esikhungweni ngasinye: ungasetha uphawu lomtholampilo ewindini elikhulu, igama lehhovisi lamazinyo kusihloko sohlelo lwe-accounting, bese usetha okwakho isikhombimsebenzisi se-interface. Ungazijwayela ngokuzimela ngohlelo lwe-accounting lokuqapha umsebenzi wehhovisi lamazinyo. Ukuze wenze lokhu, landa uhlobo lwedemo kuwebhusayithi yethu bese uqala! Uzothanda uhlelo lwe-computer accounting lwehhovisi lamazinyo, ungaqiniseka! Ukusebenza nehhovisi lamazinyo kuba lula futhi kube lula.
Inqubo yokuqina kwehhovisi lakho lamazinyo kuqinisekiswa ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-accounting. Ebhizinisini, izimo zokuphoqwa kwamandla zivamile. Umphathi angagula, futhi konke ukuxhumana neziguli kuboshelwe kuye; isisebenzi esinayo yonke imininingwane sishiye usuku olulodwa futhi asinaso isikhathi sokudlulisa lonke ulwazi kwabanye; kuyinto encane ukukhohlwa nje noma ukulahlekelwa yilokhu noma lolo lwazi. Ukuzenzakalela kwezinqubo zebhizinisi kuvikela ezimweni ezinjalo. Yonke imininingwane irekhodwe ohlelweni lokubalwa kwezimali lokulawulwa kwehhovisi lamazinyo, izinqubo zilawulwa ngokusobala futhi zisethelwe, idatha ezigulini nasemaphrojekthi kugcinwa kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-accounting. Ukuzinza akuphuli ngisho nalapho isisebenzi esisha sethulwa kule nqubo. Ukwazi ukufinyelela kuwo wonke umlando ku-database, futhi uhlelo lwe-accounting lokuphathwa kwehhovisi lamazinyo luhambisa izinyathelo nokuqeqeshwa akuthathi isikhathi esiningi. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi ngokuzayo amashejuli asebenzayo odokotela 'awahlanganisi' ohlelweni, nokuthi umphathi uyakwazi ukurekhoda kahle iziguli, sincoma ukuthi usethe umbala wesizinda ohlukile kudokotela ngamunye. Ukuze wenze lokhu, chofoza ku-'Shintsha umbala ', ukhethe okufunayo, chofoza kanye ngenkinobho yegundane lesobunxele bese uqinisekisa ukukhetha kwakho ngokuchofoza u-'Kulungile'. Uma umtholampilo wakho unodokotela abaningi kunemibala kuhlelo lwe-accounting lokuphathwa kwehhovisi lamazinyo, ungabela umbala owodwa kodokotela abaningana - ngokwesibonelo, labo abangasebenzi ngosuku olufanayo. Uma unomtholampilo onamagatsha futhi ngasikhathi sinye i-database ejwayelekile yeziguli, kuzovela futhi nenkambu eyengeziwe lapho kuzodingeka ucacise ukuthi isisebenzi sisebenza kuliphi igatsha (noma amagatsha). Ngemuva kokufaka yonke imininingwane edingekayo, gcina ikhadi lesisebenzi nazo zonke izinguquko ezikuyo.
Ngosizo lwemibiko, umqondisi noma umphathi angahlaziya isimo sezinto ezisehhovisi lamazinyo ngaphandle kokulahlekelwa amaphuzu abalulekile. Ukuthola imininingwane kumasekhondi ambalwa mayelana nokuthi kungakanani ukwelashwa okukhokhisiwe namuhla futhi kusukela ekuqaleni kwenyanga, kungakanani okukhokhelwe kwizikweletu, odokotela abahola ngenani lezikweletu, zingaki iziguli ezintsha esezivele kusukela ekuqaleni lwenyanga, ukuthi lukhulu kangakanani irekhodi lezinsuku namaviki azayo, iya kumbiko okhethekile. Ochwepheshe abanendima yokuba 'nguMqondisi', ivula lapho uqala uhlelo lwe-accounting lokuphathwa kwehhovisi lamazinyo. Uzobona inkambu ihlukaniswe izigaba ngamagrafu nezinombolo - lena yimibiko efingqiwe yezinkomba eziyinhloko zomtholampilo. Umbiko 'Weziguli' usetshenziselwa ukuhlukanisa imininingwane egciniwe yeklayenti lakho ngamapharamitha ahlukahlukene, afana nobudala, ubulili, ikheli, inani labantu abaqashiwe, lapho kwenziwa ukuqokwa kokuqala, inani lokwelashwa, isimo se-akhawunti yomuntu siqu, nokuthi bathola kanjani ngomtholampilo , njalo njalo. Ngalo mbiko, ungalandelela zonke iziguli, kufaka phakathi lezo ezingakavakasheli isikhathi eside emtholampilo wakho, futhi wenze ukusatshalaliswa okunengqondo (uma unesivumelwano nesikhungo se-SMS) ngolwazi mayelana nokukhushulwa nokunikezwa okukhethekile.
Umbiko 'Wezaphulelo' wenzelwe ukuhlaziya umsebenzi wezaphulelo - konke ndawonye futhi ngakunye. Ikakhulu, ukulandelela zonke izaphulelo ezivela kubasebenzi, ukubona ukuthi iyiphi indawo ethole izaphulelo eziningi ukuqonda ukuthi ulahlekelwa yimali ngenxa yalokhu njalonjalo. Ngombiko we-'Bill and Payments ', ungabona wonke amadiphozi emali, ama-akhawunti angavaliwe, ulandelele ukubuyiselwa kwemali kweziguli, futhi ubone ukuthi iyiphi imali ebhaliswe enkokhelweni. Ngombiko 'Wezinsizakalo Ezihlinzekiwe', ubona imininingwane kuwo wonke amasevisi ahlinzekiwe, hlola ukuthi ngabe abalwa kahle yini ezigulini, bese uhlaziya izindleko ezimaphakathi zokwelapha izinyo elithile.
Uhlelo lweqembu le-USU-Soft lochwepheshe abasebenza kakhulu linikeza ngamathuba amaningi wenhlangano yakho yezokwelapha ukuthi ithuthuke. Sebenzisa la mathuba bese uletha ukuhleleka esikhungweni sakho sezokwelapha.